42% nke ndị Britain ga-atụle ịga ezumike na Saudi Arabia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » 42% nke ndị Britain ga-atụle ịga ezumike na Saudi Arabia
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Saudi Arabia mere mkpọsa njem nlegharị anya nke ụlọ na-aga nke ọma na 2020, a na-atụkwa anya na ọnụọgụ ndị ọbịa ga-abawanye na mbido njem mba ụwa na nso nso a.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Saudi Arabia ga-alaghachi n'ụzọ iji ruo ebumnuche ya dị oke mkpa, dịka mmadụ anọ n'ime 10 Briten na-ekwu na ha ga-atụle ezumike na alaeze ahụ, na-ekpughe nyocha nke WTM London wepụtara taa (Monday 1 November).
Ebe a na-aga ga-ahụ nkwalite atụmatụ ya n'izu a ka ọtụtụ ụlọ ọrụ njem na-ekwu na ha nwere ike ịbanye na azụmahịa azụmahịa na ụlọ ọrụ Saudi Arabia na WTM London, nke na-amalite taa ma na-aga n'ihu ruo Wednesday 3 November.
Echiche nwere nchekwube sitere na nchoputa nke ntuli aka abụọ WTM London, nke a na-eme n'etiti ndị na-azụ ahịa Britain na nke ọzọ na ndị ọkachamara na-azụ ahịa njem njem mba ụwa, bụ nke mejupụtara akụkọ WTM Industry.
Ntuli aka nke ndị ahịa 1,000 chọpụtara na 42% nke ndị okenye UK ga-atụle ịga ezumike na Saudi Arabia. 19% ọzọ kwuru na ọ gaghị ekwe omume mana enwere ike ime ya.
Ntuli aka nke ndị ọkachamara azụmaahịa 676 sitere na mba gburugburu ụwa chọpụtara na ihe karịrị ọkara (51%) na-eme atụmatụ inwe mkparịta ụka azụmaahịa na ụlọ ọrụ Saudi na WTM London n'izu a.
Ọ bụ ebe a kacha akpọtụrụ aka, n'ihu Italytali n'ọnọdụ nke abụọ (48%) na Gris (38%).
Ndị na-aza azụmaahịa ahụ kwukwara na ha nwere ike ịbịanye aka na nkwekọrịta na ụlọ ọrụ sitere na Saudi Arabia, na mba ahụ nwetara 3.9 n'ime ise - ọzọ, ohere kachasị elu na ntuli aka ahụ.
Ọzọkwa, 40% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha nwere ike (30% nwere ike ịbụ; 10% nwere ike) kwenye nkwekọrịta na ndị otu Saudi Arabia / Saudi Arabia na WTM London.
Alaeze ahụ na-akwalite ọrụ azụmaahịa ya na 2021 mgbe mkpọchi nke 2020 gasịrị.
Tupu afọ 2019, amachibidoro visa njem na Saudi Arabia maka ndị njem azụmahịa, ndị ọrụ si mba ọzọ na ndị njem ala nsọ na-eleta obodo Mecca na Medina.
Mba ahụ meghere ndị njem nlegharị anya mba ụwa ókèala ya na mmalite nke mmemme e-visa ya na Septemba 2019.
Na Ọgọst 1, 2021, Saudi Arabia nabatara ndị njem nlegharị anya ọnwa 18 ka kwụsịtụrụ njem nlegharị anya n'ihi ọrịa Covid-19.
O meela nnukwu ebumnuche nke ndị njem nlegharị anya 100 nde ka ọ na-erule 2030, dịka akụkụ nke mbọ iji mee ka akụ na ụba ya dị iche iche karịa mmanụ ọkụ.
N'ịbụkwa ebe obibi nke Mecca na Medina, obodo abụọ kasị dị ọcha nke Islam, obodo ahụ na-emepe emepe "giga-projects" iji zụlite ihe nketa, omenala na ihe okike nke alaeze yana ogige ntụrụndụ isiokwu na ebe ntụrụndụ okomoko.
Ndị na-arụ ọrụ dị ka Explore na-enye njem nlegharị anya na mba ahụ na ngalaba ụgbọ mmiri ya na-etolitekwa - MSC Cruises na Emerald Cruises na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ njem na-egosi Saudi Arabia n'ọnwa ndị na-abịa.
Na obodo Saudi Arabia nke AlUla ewepụtala ebe ịzụ ahịa njem na usoro ọzụzụ n'ịntanetị iji nyere aka wulite mmata maka ebe n'etiti ndị njem na UK.
Fahd Hamidaddin, onye isi oche nke Saudi Tourism Authority gwara ndị ọkachamara ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na ATM 2021 - mmemme nwanne WTM London.
O kwuru na Saudi Arabia mere mkpọsa njem nlegharị anya n'ụlọ na-aga nke ọma na 2020, a na-atụkwa anya na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa ga-abawanye na mbido njem mba ụwa na nso nso a.
Na mgbakwunye na ịmepụta nzere njem nlegharị anya ya, alaeze ahụ na-etinye ego na mmemme egwuregwu ụwa iji bulie profaịlụ ya.
N'afọ 2019, ọ nabatara ọgụ Anthony Joshua n'ọgụ ụwa dị arọ ma ga-agbakwa asọmpi Grand Prix mbụ ya n'ọnwa na-abịa (December 2021) na obodo Jeddah.
Simon Press, WTM London Exhibition Director kwuru, sị: "Ọ ga-abụ ihe na-agba ume nke ukwuu maka ndị nnọchiteanya Saudi na WTM London ịgụ ihe dị mma sitere na ma ndị ahịa anyị na ntuli aka azụmahịa njem. Ha abụọ na-atụ aro na nnukwu itinye ego na njem nlegharị anya na-akwụ ụgwọ nke ọma, na nkwekọrịta a ga-eme na WTM London ga-enyere aka n'ebe a na-aga n'ụzọ iji ruo ebumnuche ya dị oke egwu. "